🥇 ▷ Samsung wuxuu si buuxda ula socdaa iPhone X: waa kan qoyska 'notch'! (fiidiyow) ✅
Samsung wuxuu si buuxda ula socdaa iPhone X: waa kan qoyska ‘notch’! (fiidiyow)
Maalmo yar ka hor waxaan Samsung ku shaacinay daabacaadda saddex cajaladood oo fiidiyowyo cusub ah oo loo hibeeyay iPhone X, kaas oo ay reer Kuuriyaanka ka sii wadeen ololihiisii ​​cajiibka ahaa ee daaha looga qaaday. is burinaya ka badan iskudhafan ka badan dahabka ugu dambeeya ee Cupertino. Laakiin markan runtii way ka gudubtay lafteeda.
Isgoysyada hore ee fiidiyowga cusub ee taxanaha ‘Ingenius’ waa mid caan ah feejignaan. Maaha Samsung, hase yeeshe, taas oo had iyo jeer si gaar ah u muujisay diidmo dhinaca archrival la helay, oo ku dhamaanayalama ilaawi karo nin-notch, protagonist ee anti-iPhone X-kii ugu horreeyay.
AKHRISO: Sidoo kale Galaxy Note 9 miyey ku faani doonaan ku-meel gaadhka ah ee Fortnite ee Android?
Kaliya ninka ‘notch’ ayaan ku seegi karin filimka ‘satirical’ ee Samsung, laakiin markan waa shirkad wanaagsan. Dhamaadka filimka gaaban ee fiidiyowga, kaas oo (oo) Genius ka socda Apple uu isku dayo inuu ka dhaadhiciyo qof wax iibsan kara oo ka iman kara wanaagga darandooriga, halkan ayaa imanayareerka oo dhan: aabaha, hooyada iyo wiilka, oo leh tibaaxyo u dhexeeya jahwareerka iyo jahwareerka, astaanta, Samsung, ee kooxdaas taageerayaasha aan daciifka ahayn iyo fanaaniinta ah ee Apple ay had iyo jeer la wadato. Haddii aad jeceshahay alaabada laga sameeyay Cupertino iyo haddii kale, fiidiyowgu ma fashilmi karo qosol qosolmarkaa ku raaxaysta dhan.